ဥသျှစ်ပင် - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မိုးပါးသောအရပ်များ တွင် ဥသျှစ်ပင်ကိုအတွေ့ရများသော်လည်း မိုးများသောအရပ်ရှိ ခြံဥယျာဉ်များ၌လည်း တစ်ခါတစ်ရံထိုအပင်ကို စိုက်ပျိုးထား တတ်ကြသည်။ သို့သော် စီးပွားဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဥသျှစ်ပင် များများကိုသော်လည်းကောင်း၊ စံနစ်တကျသော်လည်းကောင်း စိုက်ပျိုးလေ့မရှိကြချေ။
ဥသျှစ်ပင်သည် အရွယ်အလတ်စား သစ်ပင်မျိုးဖြစ်၍ အစေ့ကိုစိုက်လျှက် အပင်သစ်ပွားအောင် ပြုလုပ်ကြသည်။ ဥသျှစ်ပင်၏ အကိုင်းအခက်များသည် ပျံထွက်နေလျှင် အပင် သည်မကြီးထွားဘဲ အသီးနည်းမည်ဖြစ်သဖြင့် အကိုင်းအခက် များကို ချိုင်ပစ်ရပေသည်။
ဥသျှစ်သားသည် ဖြူရော်ရော်အဆင်းရှိ၍ မာ၏။ အနံ့ သင်းလျှက် အရောင်တင်နိုင်သောသစ်သားဖြစ်သည်။ ဥသျှစ် သားကို အိမ်ဆောက်ခြင်း၊ လှည်းနှင့်လှည်းဘီးများလုပ်ခြင်း၊ ပန်းပုထုခြင်း စသည်တို့အတွက် အသုံးချကြသည်။
ဥသျှစ်ရွက်နုများကို တို့စရာအဖြစ် ရောင်းချလေ့ရှိ သည်။ ဥသျှစ်ပင်သည် မတ်လမှမေလအတွင်း၌ သီးလေ့ရှိ သည်။ ဥသျှစ်ပင်သည် သာမန်ကောင်းမွန်သည့် မြေဩဇာတွင် ဖြစ်ထွန်းနိုင်သည်။
ဥသျှစ်သီးအမှည့်များကို မန်ကျည်းဖျော်ရည်ကဲ့သို့ ဖျော် ရည်စိမ်၍ သောက်လေ့ရှိကြသည်။ ဥသျှစ်သီး အမှည့်သည် လူ ကိုအားရှိစေ၍ ဝမ်းလည်းကောင်းနိုင်သည်။
ဥသျှစ်သီးသည် အချင်းအားဖြင့် လေးလက်မမှခြောက် လက်မအထိရှိ၍ အခွံမှာချောမွတ်လျှက် မာသည်။ အသီးမှည့် အတွင်းတွင် လိမ္မော်ရောင်ရှိ အနံ့သင်းသော အသားနှစ်ရှိသည်။ ထိုအသားနှစ်ကို စေးကပ်သောအစေးက ဖုံးအုပ်ထား၍ အတွင်း ၌ အစေ့ပေါင်းများစွာရှိသည်။ အမျှင်လည်းထူသည်။ ဥသျှစ် သီးမှည့်၏ အနှစ်သားမှ အစေ့အမျှင်နှင့် အစေးတို့ကိုဖယ်ရှား၍ အသားသက်သက်ကိုသာ စားလေ့ရှိကြသည်။ အစေးနှင့်အမျှင် တို့ကိုစားမိလျှင် အစေး၏ပူစပ်သောသတ္တိကြောင့် နှုတ်ခမ်းနှင့် ပါးစပ်တို့တွင် အစေးလောင်တတ်သည်။ ဥသျှစ်သီးမှည့်သည် ဝမ်းကိုက်ရောဂါကဲ့သို့သော ဝမ်းဗိုက်တွင်ဖြစ်တတ်သော ရောဂါ များအတွက်ဆေးဖြစ်သည်။ ဥသျှစ်သီးစိမ်းကိုလည်း ဝမ်းဗိုက် ရောဂါများအတွက် ချက်ဆေးအဖြစ် ဖော်စပ်ကြသည်။ ဥသျှစ် သီးစိမ်း၏ အရသာမှာဖန်သည်။ ဥသျှစ်သီးမြစ်၏ အခေါက်ကို လည်း အဖျားဖြတ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥသျှစ်ပင်မှ သစ်စေးတစ်မျိုးကိုရရှိသည်။
ဥသျှစ်ပင်သည် လိမ္မော်မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်ပြီးလျှင် ယင်းကိုရုက္ခဗေဒ အလိုအားဖြင့် အီးဂဲမာမဲလို ဟုခေါ်သည်။  ဥသျှစ်သီးကို ရခိုင်လို ဝရာဇ်သီးဟု ခေါ်သည်။ 
ပုံသဏ္ဌာန် : -အပင်လတ်မျိုးဖြစ်ပြီး ပေ(၃ဝ) မှ ပေ (၄ဝ) အထိမြင့်သည်။ အကိုင်းအခက်များ ရှုပ်ထွေးပြီး သန်မာသည်။ ရွက်လွှဲထွက်၍ သုံးရွက် မွှာပေါင်းဖြစ်သည်။ ရွက်မြွှာများ ဘဲဥပုံ ရှည်မျောမျော ဖြစ်၍ အရင်း အနည်းငယ်သွယ်ဝိုက်ပြီး အဖျားချွန်သည်။ အဖြုရောင်ပွင်ႛသည်။ အသီး လုံးဝိုင်းပြီး အပေါ်ခွံ မာကျောသည်။ အစေ့များစွာပါသည်။ အပင် - ပင်လတ် မျိုးဖြစ်၍ အမြင့် ၂၅ ပေခန့် ထိမြင့်သည်။ အခေါက် ကြမ်းပြီး ညိုဖျော့ဖျော့ အရောင် ရှိသည်။ အပွေးများ အစင်းလိုက် ရှိသည်။ အကိုင်း အခက်များ ရှုပ်ထွေးပြီး သန်မာသည်။ ၁ လက်မခန့် ရှည်သော ဆူးချွန်များ အလှည့်ကျ ထွက်သည်။ အရွက် - ရွက်လွှဲ ထွက်သည်။ သုံးရွက် မြွှာပေါင်း ဖြစ်သည်။ ရွက်မြွှာများ ဘဲဥပုံ ရှည်မျောမျော ဖြစ်၍ အရင်း အနည်းငယ် သွယ်ဝိုင်းပြီး အဖျားချွန်သည်။ အလယ်အရွက် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ ရွက်ပြား ချောပြီး အနား ပတ်လည် အဝိုက်ငယ် ကလေးများ ရှိသည်။ အနံ့သင်း၏။ ရွက်ပြား ချောသည်။ အပွင့် - ကြီးမားပြီး အဖြူရောင် ရှိသည်။ မွှေး၏။ ကဆုန် ၊ နယုန် လများတွင် ပွင့်သည်။ အသီး - စိမ်းဝါရောင် ရှိ၍ ကြီးမားသည်။ လုံးဝိုင်းပုံ ဖြစ်ပြီး အပေါ်ခွံ မာကျောသည်။ အတွင်း၌ လိမ္မော်ရောင် အစေးများဖြင့် လိမ်းကျံနေသော အစေ့များ ရှိ၏။ နယုန်လ မှာပင် သီးကင်းထွက်၏။ အသုံးပြုနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ : အရွက်၊ အသီး။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့နိုင်သောနေရာများ : မြန်မာ နိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံးတွင် ပေါက်ရောက်သည်။ သဘာ၀ အလျောက် ပေါက်ရောက်သည အသုံးဝင်ပုံ : အာနိသင် - မြန်မာ ဆေးကျမ်းများ အလိုအရ ဥသျှစ်သီးမှည့် သည်ချို၏။ ပူ၏။ အနည်းငယ် စပ်ရှိန်း၍ သလိပ်ကို ယုတ်လျော့စေ၏။ သွေးကို ပွားစေခြင်း၊ လေသလိပ်၊ သည်းခြေနာ၊ အစာမကြေနာ နှင့် အပူကို နိုင်၏။ ဝမ်းကို ရွှင်စေ၏။ အဖျားကို နှိမ်နင်း နိုင်၏။
အသုံးပြုပုံ- အရွက် ၁။ ဥသျှစ်ရွက် ပေါင်းတိုက်ရည်ကို ကြွေဇွန်းငယ် တစ်ဇွန်းခန့် တိုက်ပေးက ကလေးများ ဝမ်းပျက် ရောဂါနှင့် ချွဲသလိပ် ကျပ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ ၂။ ဥသျှစ်ရွက်ကို ကြိတ်၍ မျက်စိ၌ ကွင်းပေး ပါက မျက်စိနာ ရောဂါ ပျောက်၏။ ၃။ ဥသျှစ်ရွက် ညှစ်ရည်ကို နံနက် ည သောက်ပေးပါက ဖျားခြင်း၊ မျက်ရည်ပူ ယိုခြင်း၊ ချောင်းဆိုး ခြင်းများ ပျောက်၏။ ၄။ အနာ၊ အဖု အပိမ့်များကို ၎င်းအရွက်စိမ်း ကြိတ်၍ အုံပေးပါက နုလျှင် ပိန်၍ ရင်းလျှင် ပြည်ပေါက်၏။ ၅။ ကလေးများ သန်ထလျှင် ဥသျှစ်ရွက် ညှစ်ရည်ကို အရွယ်အလိုက် ချင့်၍ တိုက်ပေး ခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်း စေနိုင်၏။ 
↑ Plummer, J. (2020). Aegle marmelos. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T156233789A156238207. doi:10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T156233789A156238207.en. Downloaded on 07 March 2021.
↑ genus Aegle။ Germplasm Resources Information Network (GRIN) online database။
↑ ၃.၀ ၃.၁ Taxon: Aegle marmelos (L.) Corrêa။ GRIN Global, National Plant Germplasm System, US Department of Agriculture (19 September 2017)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဥသျှစ်ပင်&oldid=717366" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။